विवाह गर्न एक साजिश। कसरी एक जीवन साथी भेट्टाउनुहोस्।
सार्वजनिक रायले महिलालाई सधैं सम्बन्धको पहलको कुनै पनि खुलासाको निन्दा गरेको छ। तर यो मतलब छैन कि रातो केटीहरू खिचोले बसिरहेका थिए, असल जवान मानिस तिनीहरूलाई ध्यान दिन खोज्दै। युवा महिलाहरु को शस्त्रागार मा त्यहाँ केवल पुरुष ध्यान को आकर्षित गर्न को लागि धेरै तरिकाहरु थिए, तर मुकुट को तल सुतेर पनि ल्याउन को लागि। निस्सन्देह, प्राय: यो केवल मनोवैज्ञानिक हेरफेर, महिला ट्रिकरी वा भित्तिपन हो। तर प्यारी देवताहरूको जादू मनपर्ने काममा इच्छुक थिए। एक पटक हामी ध्यान दिनेछौं, भविष्यमा पतिको लागि संघर्षमा सबै तरिकाहरू राम्रो छन्। जादूमा प्रकृतिको आधारभूत नियमको बिर्सन नबिर्सनुहोस्: "प्रत्येक क्रियाकलापसँग विरोध छ।" त्यसोभए, अरू कसैको परिवारलाई स्फूर्ति दिन वा तपाइँलाई बेपत्ता भएको व्यक्तिमा माया गर्ने मनन लगाएर खुशीको आशा गर्नुहुन्न।
एक समय परीक्षण गरिएको रिक्ति थिटोकोसको सामना गर्दै विवाह गर्न एक साजिश हो। सहमत हुनुहोस्, जसले उनीहरूलाई सबै आशा र महिलाहरूको चिन्ता बुझ्न सक्दैनन्। दुर्भाग्यवश, तपाईं अभिषेक भर्जिन को संरक्षण को पर्वमा एक वर्षमा मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यस नियमको अनुसार, एक केटी जो विवाह गर्न चाहन्छ वा एक प्रेमी खोज्न, चर्च सीमाको माथि बढ्दै जान्छ, निम्न आवाजमा निम्न शब्दहरू भन्नुपर्दछ: "भर्जिनिया मरियमलाई धन्यबाद, सारा स्नोब्लाकमा राख्नुहोस् र म दुल्हन हुँ।"
पृथ्वीका लक्षणहरूमा जन्मेका युवा स्त्रीहरू, तपाईं बिरुवाहरू प्रयोग गरेर विवाह गर्न साजिश गर्न सक्नुहुन्छ। बुधबार बुधबार चन्द्रमा चन्द्रमा आयोजित संस्कार गरिएको छ। यो आचरण गर्न, तपाईंलाई पूर्व-तयार सेम बीउ (एक पनि नम्बर), एक बर्तन र पृथ्वी, एक गिलास पानी चाहिन्छ। कुनै मोमबत्ती र अन्य जादुई गुणहरू खरीद गर्न आवश्यक छैन। यो अनुष्ठान सृष्टि को शक्ति द्वारा, को रूप मा उनि भन्छन्। यसकारण, यदि तपाईंले आफ्नो आधा भेट्नुभयो भने, सेम रोपण गर्दा, सबै भविष्यमा कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो भविष्यका पति कसरी हेर्न चाहानुहुन्छ। यदि दुलहीको लागि उम्मेद्वार पहिले नै उल्लेख गरिएको छ भने, एक शानदार विवाह र एक साथ अर्को सुखी जीवन कल्पना गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, विवाह गर्न साजिश दोहोर्याउन नबिर्सनुहोस्: "बबम बढ्छ, र म केटीलाई विवाह गर्छु।" बीउलाई पानी लगाउँदा, तपाईंको दाहिने हातमा गिलास राख्नुहोस् र घडीको दिशामा लिनुहोस्, दोहोर्याउनुहोस्: "यो मेरो जस्तै हुनेछ।" लिप लक। "" जिभाइ कुञ्जी। "अमीन।" अमीन। "अमीन।" त्यस पछि, विन्डो डिलमा बर्तन राख्नुहोस्, त्यसो कि चन्द्रको लाइट यसमा पर्दछ। अब तपाईं गोलीहरु को प्रतीक्षा र पौधे को हेरचाह गर्न को लागी कि यो सहकर्मी छैन।
जब जीवन विवाह एक कदम हो, स्थिति को जीवन मा जान्छ, तर मानिस यो गर्न हिम्मत गर्दैन। निराश नगर्नुहोस्, यस्तो मामलाको लागि त्यहाँ विवाह गर्ने साजिश हो, सही दिशामा प्रत्यक्ष घटनाहरूलाई मद्दत गर्न।
सजावट चन्द्रमा भएको चन्द्रमा, बुधवार र शुक्रबार। तुरुन्तै चाँदको चिन्हमा चन्द्र फेला पार्न परिणामलाई प्रभाव पार्छ। जादुई कार्यहरूका लागी तपाईंलाई स्यान्डलवुड, नींबू र साइप्रस, साथै साथै गुलाबी मोमबत्तीको आवश्यक तेल चाहिन्छ।
सम्पूर्ण प्रक्रियाले तपाईंलाई धेरै समय लाग्दैन। पहिले, चारवटा नींबू तेलको मिश्रण तयार पार्नुहोस्, चिन्ताको तेलको दुईवटा बत्ती र स्यान्डलवुड तेलको दुईवटा ड्रपहरू (तपाइँ दौड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ)। तैयारीको समयमा, आवश्यक तेलहरू तपाईंको सकारात्मक विचार र चाहनाहरू चार्ज गर्न प्रयास गर्नुहोस्। सबै मनपर्ने रंगहरू एक सुखी जीवनको साथ कल्पना गर्नुहोस् तपाईंको प्रिय संग।
केवल चुनेको एक साथ बायाँ, तेल मिश्रण र मोमबत्ती संग, आधारबाट रङबाट, यसलाई आगो लगाएर यसलाई पूर्णतया जलाइदिनुहोस्। यदि योजनाहरू अनुरूप हुन्छन् र प्रेमीले तपाईंको सम्बन्ध सम्बन्धी जारी राख्न चाहन्छ भने, बाँकी आश्वासन - विवाह भर्खरै कोने वरिपरि छ।
जो केटी लामो प्रतीक्षा बिना परिणामहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ द्रुत विवाहको साजिश सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईं विवाहमा वरिपरि थिए भने दुलहीलाई थोडा समयका लागि तपाईंलाई जूता उधार दिन अनुरोध गर्नुहोस्। चन्द्रको उज्यालोमा, जुत्ताहरू वसन्त पानीको साथमा, "मेरो लागि जूता, जमीन, चलन," शब्दहरू दोहोर्याउनु, ताकि म सकेसम्म छिटो विवाह गर्न सक्छु। "मुख ताला छ, र यसलाई कुञ्जी भाषा हो।" त्यसो भए।
तिनीहरू भन्छन् कि केही महिना पछि प्रारम्भिक वैवाहिक कार्यको लागि साजिश। तथापि, के यो यति द्रुत चाँडो छ? आखिर, लोक ज्ञानको रूपमा भनिएको छ, "विवाहित नगर्नुस् ..."
पामस्ट्री: प्रेम, विवाह र हृदयको रेखा
के कील तोडिएको छ भने के आशा गर्छ? साइन इन र यसको अर्थ
जाडोमा संकेतहरू के हुन्?
एल्डर। नाम र चरित्रको अर्थ
मे 13 मा जन्मेका व्यक्तिहरुका विशेषताहरु
रनहरू दौड छन्। यो के हो? तिनीहरू के लागि प्रयोग गरिन्छ?
किन रोटी निर्माता मा रोटी पुगेको छैन? पाक लागि रोटी निर्माता मा Regimes
इटालियन गुणस्तर सबैलाई उपलब्ध छ!
हलिवुड र रूसी सिनेमाको इतिहासमा सबैभन्दा खराब अभिनेता
Stavropol को जनसंख्या संख्या। जनसंख्या र Stavropol को रोजगार
कलाईमा यरूशलेमबाट रातो थ्रेड
यांत्रिक प्लान्ट पुछ्ने: संरचनात्मक सुविधा र कार्य
सधैंभरि घरमा warts को कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न
Pushkin गर्न विदाई: मित्र को सम्झनाहरु को प्रस्तुति
आफ्नै हातले किंडरगार्टन मा छोराछोरीको लागि साइट बनाउन
कान multivarka - स्वादिष्ट पोसिलो माछा सूप